Jabhadayntii Af-soomaaliga:Qormadii: 2aad
You are here: Home Home Jabhadayntii Af-soomaaliga:Qormadii: 2aad
Dugsi aanu xalay seexannay ayaanu ka toosnay. Aniga iyo Garaan-bii ayaanu ahayn.Waxaanu aragnay Laba-dhuumood iyo Raamaale oo markaas xerada soo gelaya,
Jabhadayntii Af-soomaaliga: Qormadii: 2aad
Dugsi aanu xalay seexannay ayaanu ka toosnay. Aniga iyo Garaan-bii ayaanu ahayn. Waxaanu aragnay Laba-dhuumood iyo Raamaale oo markaas xerada soo gelaya kuwii oo aad hugunka iyo haasaawaha qosolku badhxay mooddo maalmihii ay dhasheen. Ardaagii aanu xalay seexannay oo meel dugsiya ahaa ayaanu markaa ka toosnay. Arraa-arraa ayaa dabka noo saarraa, bustayaal iska warran ahna waanu huwanayn. Markaa ay Laba-dhuumood iyo Raamaale noo soo gelayaan, gacanta waxaanu ku haynay wax aan badnayn oo labo-aas ah oo xalay nooga soo hadhay. Markii aanu saaxiibbadayo aragnay in ay nagu soo socdaan ayaanu bustayaashii ku hoos qarsannay annaga oo filaynay in ay dhakhso nooga tegi doonaan. Show iyaguna waxoogaa ijibana ah ayay qarsanayeen oo habeen-ka-hadh ahaa.
La isku boob warka markiiba. “Waar Raamaale, xaggee ka timaaddeen goortan, ma Tuuladaa u hoyateen.” Ku-ye: “Haa oo Mujaahidkan oo weerarradii dorraad dhacay ka sheekaynayay ayaanu ka rasaynaynay.
Hadda ayay bilaabatay. Arraa-arraagii ayaa la fuuqsaday, laba-aaskii iyo habeen-ka-hadhkiina waa la wada budliyay. Ninkii Laba-dhuumood oo Qanaaa’imkii dagaalka wax badani ka soo gaadheen ayaa is-hayn waayay oo yidhi: “Waar ina keena aan Tuulada tagnee.” Kor inta loo wada booday ayaa mar la wada yidhi: “Alleylehe waxaasaa Jabhad ah.” Markiiba ninkii Raamaale ayaanu isha ku gubnay annaga oo fahamnay in aanu Mujaahidka si wanaagsan uga rasayn muddaakaraadka shalay markii uu jaadka balli-balliga kaga dhigay.
Goor barqo dheer ah ayaanu dukaankii Sahra Baroon fadhiisannay. Haddi in yar la fadhiyayba ninkii Laba-dhuumood ayaa burqaday: “Sahanka ayaanu ka labo-celinnay.” Raamaale dib ayuu u yara fadhiistay oo xiiso badan ma qabin maa daama uu shalay iyo xalay oo dhan la fadhiyay. Labadayadii Mujaahid ee kale ayaa hore u soo fadhiisannay illeyn maalin-dagaalkii ayaa naga galaye. Mujaahidkii Raamaalena waxaabu iska dhigay nin Mujaahidkan aanu ka rasaynayno ride ka ah. Dhowr jeer ayaanu isku daynay si aanu u qoyno in aanu aag-beddelanno, way se naga katibtay.
Mujaahid Laba-dhuumood nin gacan furan ayuu ahaa oo aan waxba Mujaahidiinta ka hagran. Dhowr jeer oo ay qaar noo soo galeen oo ay ku yidhaahdeen waxba ha nagala xishoon Wallaahi wuu kaga rogay. Qaar meelo aan naga fogayn ku go’doonsanaa qudhooda kuwii uu wax ugu dhiibay ayaa kala aammusay.
Laba-dhuumood ayaa sheekadii u baxay. Ku-ye:
“Xogtii cadawga markii aanu gacanta ku dhignay ayaanu kaartadii dagaalka dhignay. Subax hore ayaanu cidhib barako leh ku dhufannay. Waddaba waddo ayay noo dhiibtay. Wisdaanu marnay. Iyagii oo hurda ayaanu ku cabaadnay ka dibna ka dhex toosnay. Ilaahay waa uu ogaaye waanu ku dhillay oo run ahaantii laba-aabbudh gelinnay. Goor danbe oo aanu ambo-bax nahay oo aanu kabahiiba ka sii subkannay ayaa ciidankayagii sahanku miino ay dhigeen baabuur ay leeyihiin la kacday. Bahal uuro ah oo madow ayaa circa isku shareertay. Bartii kulanka intii aanu ku sii soconnay ayaanu aragnay laba fayfle oo markii xabbaddu bilaabantayba show fayfka soo sudhay.”
Halkaa isaga oo maraya oo muddaakaraadkii ku dhex jira, colkii kalena ay ka rasaynayaan ayaa dukaankii Sahra Baroon waxa soo galay, mid jabhad ah oo aan Tuulada ka tegin, malahayga weligiina dagaal gelin. Dhowr midh oo sigaar ah inta uu iibsaday ayuu baxay. Intii uu dukaanka ku jiray waa la aammusnaa oo waa la shanqadh-tirtay. Markii uu baxay ayaa Raamaale yidhi: “Waa kii Meelna-ma tage ee kheyr-laawaha ahaa. Soco Laba-dhuumood illeyn guutadiinna ayuu ka tirsan yahaye.” Laba-dhuumood oo hadalkii yar dhibsaday ayaa ku celiyay: “Ma annaga uun baa, idinkuba waad ka leedihiine.”
Laba-dhuumood oo mar kale u biyaystay in uu muddaakaraadkii halkii ka sii wado, ayaa dukaanki waxa soo gashay inan jalaq-san oo xarrago la tiicaysay. Laba-dhuumood ayaa oogsan gaadhay. Raamaale ayaa gacanta qabtay oo fadhiisiyay hoosna ugu yidhi: “Waar naga fadhiiso waa laga dab-ridaye.”
Hadba Laba-dhuumood ayaa Sahra Baroon dalbanayay si ay jaadka, sigaarka iyo shaahaba u soo kordhiso. Mar mar ayuu caano ku darayay. Ma jabhad iyo baad moodaysaa. Kolka qadhaadhkii ayaa na gaadhay, gaar ahaan ninkii laba-dhuumood. Waa kan mar kale ku noqday muddaakaraadkii:
“….Haa..halkee ayaan marayay….haa bartii kulanka intii aannaan gaadhin ayay fayflayaashii oo rarani nagu soo baxeen. Waa maxay waxa ay sitaan alaab. Bir-libaaxdu tiroba ma lahayn. Yaabnay oo weyddiinnay halka ay waxan ka keeneen.” Ku-ye: “Qaar fadhato ah oo show magaaladii Hargeysa soo bililiqaystay ayaanu ku soo baxnay. Dee ninkan oo ammaanku u furnaa oo xabbadduna dhuunta taallay waa ka keebka taabtay. Ilaahay ayaa nala baxsaday oo maalin kale u dhigtay, laakiin fadhatadii dhulka ayay taabtay alaabtiina halkii ayay kaga yaaceen.”
Show ninkii Garaan-bii oo xilliyadan danbeba jaadku suququl ku ahaa oo indhihii qalloocdeen siduu xagga Laba-dhuumood u eegayay ayaa si daallan u yidhi: “Malaha caawa biyo-raacin meynno.?” Mujaahid Raamaale ayaa halkan ka soo booday oo yidhi: “Ninkan Garaan-biina waan ka yaabay. Dhaxaa la yidhi Mujaahidku waa shilke afar duumood ah. Ballanka Ilaahay waxaan ka baqayaa in ninkaa maraaruhuba go’an yihiin.”
Sahra Baroon oo dukaanka miisaysay xaaladdoodana aad uga dheregsanayd kana war-qabtay hantida baxday iyo inta la kala qabay ayaa sheekadii ku darsatay. Ku-ye: “Oo Mujaahidku wuu idiin hooraye xaalkiinnu ma dab-saar baa?”
Qaybtii kowaad halkan ka daalaco